Airbus A320 परिवार मेगा पैक FSX
प्रश्न Airbus A320 परिवार मेगा पैक FSX
6 महिना3सप्ताह पहिले #1314 by स्पोर 55
नमस्ते Rikooo सिमर्स!
म राम्रो 15 को लागि simming भएको छ र यो सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क प्याकेज कहीं पनि हुनु पर्छ! तर .......
म सोच्न चाहन्छु कि म सबै चीजहरु मा धेरै फायदेमंद हूँ तर म यो प्याकेज एकghhh काम नहीं गरेर सकता!
म केटाहरूलाई धन्यबाद गर्न चाहन्छु कि यो प्याकेज सँगसँगै राख्नुहोला। यसका आधारमा यसका आधारमा यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारे जानकारी गराउनका लागि तपाईले जानकारी गराउनुभएको छ। एक ठीक करो ताकि यो ठंडा र डार्क नहीं, मैले पाया छ कि धेरै मान्छे को एक नै समस्या छ, यो मेरो धन्यवाद सबै भन्दा राम्रो क्रिसमस हुनेछ! (ps ले भाग्यको साथ2पटक स्थापित गरेको छ)
6 महिना2सप्ताह पहिले #1329 by स्पोर 55
bit disapointed वहाँ यस मंच मा कुनै मदद छैन :(
6 महिना2सप्ताह पहिले #1333 by Dariussssss
तपाइँले त्यस प्याकको डाउनलोड पृष्ठमा वर्णन गरिएका परिवर्तनहरू गर्नु पर्छ।
यो काम गर्न को लागी स्पष्ट गर्न के गर्न स्पष्ट छ। यदि तपाईंले सबै कुरा सही गर्नुभयो भने .यो काम गर्नु पर्छ। साथै, तपाईंले उल्लेख गर्नुभएन तपाईसँग FSX SP2 ठीकसँग स्थापित छ, किनकी यो एक हुनुपर्छ। धेरै चीजहरू बिना यो काम नगर्न सक्दछ। साथै, हुन सक्छ कि यो सही तरिकाले स्थापित छैन। धेरै मानिसहरू यसको बारे मा शिकायत गर्दै छन्, तर तीमध्ये अधिकांशले आवश्यक चरणहरू छुटेका छन्। साथै, यो तपाइँको FSX विच्छेद हुन सक्छ, त्यसैले जाँच गर्नुहोस्।
त्यसोभए, पूर्वनिर्धारित उडान सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईंले चाहानु भएको विमान रोज्नुहोस्, तपाईले हवाईमा राख्नु भएको छ। सबैलाई बन्द गर्नुहोस्, र म सबै कुरा भनेको DEFAULT को रूपमा बचत गर्नुहोस्। अब, FSX cfg फाइलमा जानुहोस्। म तपाईंको पीसीमा कुन OS को थाहा छैन, त्यसैले मलाई थाहा छैन कि यो कहाँ छ। मुख्य खण्डमा, आवश्यक रेखा थप्नुहोस्, यसलाई सुरक्षित गर्नुहोस्।
भन्दा, तपाईको FSX सुरु गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
6 महिना2सप्ताह पहिले #1335 by 3201907
A320 प्याकेज अद्भुत छ, खासगरी फ्रीवेयर को लागी र अब यसमा हनीवेल एफएमसी समावेश छ। म यो धेरै, प्रायः प्राय: एफपीएसमा राम्रो हुन्छ किनभने यो "अध्ययन स्तर" होइन, यसले अझै पनि सुरूवात, ईन्धन पंप, आदि जस्ता उचित वस्तुहरूको एक सभ्य राशि प्रदान गर्छ।
मैले कम्प्यूटरको परिवर्तन र त्यसपछि FSX बाट P3D बाट अपग्रेडको कारण तीनवटा (3) पटक यो प्याकेज स्थापना गरेको छु र मैले कुनै पनि समस्या भएन। तपाईंको अन्तमा केही गलत हुनुपर्छ?
5 महिना4सप्ताह पहिले #1343 by स्पोर 55
सबै सहयोगको लागि धन्यबाद! मैले अन्ततः यो yeeeeaaah काम गर्दै
मैले सञ्झ्याल 10 लाई प्रत्यक्षसँग XXUMX सँगै प्रयोग गर्दछु ताकि मैले यसलाई प्रत्यक्ष X 12 मा परिवर्तन गरें र सबै कुरा अब काम गर्न लाग्दछ।
नेभिगेसन रोशनीका अलावा, कुनै पनि विचारहरू कोही? सायद यस फिक्सले समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्नेछ
राम्रो सेटको लागि धन्यबाद!
5 महिना5दिन पहिले #1365 by storminnorman3
किन यस एक्सटेन्सनमा कुनै2ईन्जिनियरिङ सुरू गर्न सधै मा कठिनाई छ? म FSX भाप संस्करण प्रयोग गर्दछु
5 महिना4दिन पहिले #1366 by 3201907
निश्चित गर्नुहोस् कि एकपटक तपाईंले "इन्जिन 1" सुरू गर्नुहुन्छ जुन तपाइँ "इन्जिन" मा "खून" गर्न स्विच गर्नुहुन्छ .... त्यसपछि आगो "इन्जिन 2"
3 महिना3सप्ताह पहिले #1378 by LX_96
हरेक पल्ट म विमान शुरू गर्न चाहन्छु इन्जिन बन्द गर्दछ। त्यसपछि मलाई तिनीहरूलाई पुन: सुरु गर्नुपर्दछ।